(အင်ဂျင်နီယာဘော်ဒီဆိုဒ်) မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာအလုပ်မှာစန်းသစ်တဲ့အရာတွေဖန်တီးနိုင်ပါသလား ? - JAPO Japanese News
ဂါ 07 Jan 2020, 10:51 မနက်
စားသောက်ဆိုင်၊ စက်ရုံ၊ စတိုးဆိုင်၊ စိုက်ပျိုးရေး နဲ့ အခြားဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နေရာတော်တော်များများမှာ အလုပ်သမားရှားပါးမှုဟာ တော်တော်လေးအခက်ကြုံနေရတဲ့ အခြေအနေပါ။ အဲဒီထဲမှာမှ အလုပ်ကြမ်း သို့မဟုတ် ကာယလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် ဂျပန်လူငယ်တွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းလို့မရတဲ့အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်။
အဲဒီလုပ်သားရှားပါးတဲ့ထဲမှာ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဟာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုတာက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗိသုကာတွေရဲ့ အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းအပိုင်းမှာတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်ပြီး လမ်းတံတားတွေဆောက်လုပ်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းတဲ့ အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးက ကာယလုပ်သားတွေကိုအထင်သေးလေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် လခကတော့တော်တော်ကောင်းပေမယ့် လူတွေသိပ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
အဲလိုနဲ့မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းရဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ Gymတွေသီးသန့်အချိန်ပေးလုပ်စရာမလိုဘဲ အင်ဂျင်နီယာဆိုဒ် (အင်ဂျင်နီယာဘော်ဒီ)ကိုရစေမယ် ။အဲဒါဘာလိုလဲဆိုတော့ ဒီအောက်က ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ပါ။
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုတာက ဆောက်လုပ်ရေးရဲ့ အဓိကအခြေခံလုပ်ငန်းပါ။
တံတားတွေ တာတမံတွေဆောက်လုပ်တာဟာလည်း သူတို့ရဲ့ အလုပ်ပါပဲ။
ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဟာနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံကိုအခြေခံအောက်ခြေကနေပံ့ပိုးပေးတဲ့အရေးကြီးအဓိကကျတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး သေချာတာကတော့ အဲမှာရှိတဲ့ယောကျ်ားသားတွေက သန်မာတဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမိုက်စားဘော်ဒီနဲ့ပေါ့။ တစ်ခါလောက်တော့ ကာယလုပ်သားတွေကို လူတိုင်းလူတိုင်းကမျက်စိကျစေမယ့်အခွင့်အ‌ရေးတွေအများကြီးရှိရင်တော့သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းအသင်းကလပ်တွေမှာ မိန်းကလေးမန်နေဂျာတွေ ရှိနေရတဲ့အကြောင်းအရင်း
တိုကျိုမြို့ ကို စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ဝိညာဥ်က ခေါင်း ပဲပါတယ် ဆိုပါ့လား ! ?
နျူကလိယမတော်တဆမှုကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေကို မဖြိုချခင် ၂၃ ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ !!!!